Umbuzo Wokufakwa Kwe-Acoustic
Phinda Usebenzise Indaba
Kuthunyelwa kwamanye amazwe
Izifaki ezivunyelwe ze-TSG
Ukukhangiswa kwe-Rooftop Colored Versions of Silent Roof Systems
Vakashela Ibhulogi Lethu Ukuze Ubuyekeze Okwenzekayo
Imangalisa Ngokuphazima Kancane Imvula kunoma iyiphi i-Metal noma esinye iSakhiwo Sophahla Oluqinile
Ingabe Umsindo Womsindo Uyinkinga Kuwe?
Umonakalo we-O2 Arena odalwe ngesikhathi seStorm Eunice. Izingxenye zophahla lwendwangu yale ndawo, eyayaziwa ngokuthi i-Millennium Dome, yaqhekezwa ngamandla omoya wesiphepho ngomhlaka-18 February 2022.
Umbuzo owodwa obuzwa iSilent Roof Ltd kumthethonqubor isisekelo
“Kuphephe kangakanani ukufakwa kwe-Silent Roof ezimeni zesimo sezulu esinesivunguvungu?” Isithombe esingenhla ngesokufakwa kwakamuva kwe-Silent Roof okuthathwe ngemuva kwesiphepho u-Eunice edlule e-UK. Ukufakwa kusesitezi se-10 sebhilidi elichayeke ezintweni. Siyajabula ukubika, njengoba ubona, lokhu noma okunye kokufaka kwethu okuqediwe akukho monakalo ngenxa yesiphepho u-Eunice nanoma yisiphi esinye seziphepho zakamuva zango-2021-22.
Bheka ikhasi lethu le-Facebook lapha
Lesi siqeshana sevidiyo sibonisa izifaki zethu ezimisiwe ze-TV & Studio Group, zisebenzisa ilogo ene-stencil endaweni eqediwe yokufakwa kwe-Silent Roof London Film Studios.
Izithombe ezimbalwa ezibonisa ukufakwa kwe-Silent Roof kwenziwa esitezi se-10 sebhilidi. Okuhlukile kancane esimweni esivamile.
Thina e-Silent Roof yithi sodwa esihlinzeka ngezinto zethu eziThule eziNciphisa ngokuphawulekayo umsindo wemvula ovela ezindaweni zophahla. Sizinze ogwini oluseningizimu ye-UK, ihhovisi lethu elibhalisiwe liseTorquay, Devon, e-UK. Senza ukufaka kulo lonke elase-UK ngokuya ngemikhawulo ethile futhi sinikezela ngezinto zethu ezihlukile kubafaki emhlabeni jikelele. Unentshisekelo yokukhuluma nathi ngephrojekthi yakho? Unentshisekelo yokuthekelisa? Bheka ngezansi kwaleli khasi, noma usishayele.
Ucingo: 01803 203445 Ucingo: 077865 76659
Ungamisa kanjani umsindo wemvula ophahleni lwensimbi.
Thina eSilent Roof senze isixazululo senkinga yomsindo wemvula ovela ophahleni oluqinile ungene endaweni ephilayo noma yokusebenza ngaphansi. Sisebenzisa i-Rain Noise Reduction Technology Material yethu phezu kobuso obufana neProfayili Metal Sheeting nokunye okunjalo.
Lapho usufake isikhala ngezansi kophahla oluphathisiwe lusizakala ngokushesha ekwehlisweni okumangalisayo kokungcoliswa komsindo wemvula. Izithombe ezikulesi siza zingumfanekiso wendlela i-SRM esetshenziswa ngayo iProfayili Metal Roof enkulu e-Honey Monster Factory eSouthall, London, ngoSepthemba 2018, wonke amamitha skwele we-5400.
Iphrofayili Metal Roofing
Iphaneli Yophahla Lephrofayela leProfayela - Yehlisa Ngokuzwakalayo Imisindo Yomvula
Ezimweni lapho umsindo wemvula kuphrofayela yensimbi noma ophahleni lwenhlanganisela uthinta isikhala somsebenzi esingezansi usinike ucingo kwaSilent Roof,
sinesixazululo senkinga yakho. Ngokuhlangana nomkhiqizi ohola phambili womhlaba wemikhiqizo yokufakelwa yematrix emithathu Silent Roof System, efakwe ngaphezulu kophahla lwakho olukhona Dramatula Linciphisa umsindo wemvula ngaphambi kokuba kwenzeke. Umsindo wemvula kulezi zinhlobo zezakhiwo zophahla ziyinkathazo ezindaweni eziningi ezahlukahlukene; amayunithi efektri yezimboni, izikole, imboni yezokuhlunga, amahhovisi ezentengiso nokunye.Izithombe ezikulesi siza zingumfanekiso wendlela i-SRM esetshenziswa ngayo iProfayili Metal Roof enkulu e-Honey Monster Factory Roof In Southall, London, Sep 2018 , wonke amamitha-skwele angama-5400 ayo.
Ukufakwa kwe-Silent Roof kuqedwa ngokushesha futhi wonke umsebenzi wokufaka wenzeka ngaphandle kwesakhiwo ukuze ungaphazanyiswa imisebenzi engezansi kophahla okukhulunywa ngalo.
Ukukhangiswa kophahla lwendlu enemibala
YEBO, okukhangisiwe kweThule Roof Rooftop kuyatholakala ngemibala ehlukahlukene. Iba logo yenkampani yakho kunoma iyiphi indawo yophahla. Akukho ukupenda, susa futhi uhambise kabusha nganoma yisiphi isikhathi. I-UV izinzile.
Ngo-2019, safikelwa ngumkhiqizo womhlaba wonke ngenkampani yethu yokufaka owabuza lo mbuzo, 'yimiphi eminye imibala etholakalayo?'
Kepha lolu phenyo belungekhona ukucindezela umsindo wemvula kodwa belwenzelwe ukukhangisa okwophahla kophahla. Isendlalelo sombala owodwa esambozwa ngombala ohlukile we-logo yezinkampani.
Le projekthi ibingeyokwakha uphahla lwamamitha skwele ayi-10,000 XNUMX olwaluqashelwe izakhiwo eziningi eziphakeme, isiteji esifanelekayo sokukhangisa.
Ukulandela izinyanga zokuxoxisana nemizamo ngaphakathi komnyango we-R & D wezinto zethu ezikhiqizwe eJalimane, inguqulo entsha esiyibiza ngokuthi,
Umbala weSilent Roof Material (CSRM), wazalwa.
Manje sebenzisa ophahleni lwakho ophahleni ukukhangisa FUTHI ucindezele umsindo ocasulayo wemvula ngasikhathi sinye nalokhu kwahluka okuhlukile kweSilent Roof.
UMBUZO: Kungenzeka ukuthi isikhwama esisodwa sohlelo lokusebenza KWABANYE?
Indlela yokufaka iqala ngongqimba wesisekelo sombala okhethiwe, ilogo yenkampani inqunywa kusendlalelo olukhethekile lwe-CSRM futhi ivikeleke kusendlalelo sesisekelo. Inkampani yethu yokufaka ingahlinzeka ngale nsizakalo yokufaka emhlabeni wonke. Ngabe unesimo esingahlomula kulokhu kuthuthukiswa okusha? Ngophahla, ukukhangisa Xhumana nathi manje ukuthola eminye imininingwane.
Kusebenza Kanjani ... Ukuzwa Kuyakholelwa
Ngingawuvimba kanjani ukuthi umsindo wemvula ungumbuzo ojwayelekile Awukwazi ukuvimba imvula, kodwa uSlaza Roof Ozothula ngendlela ephakeme uzonciphisa umsindo wemvula kube owokuhleba.
Isiqeshana sevidiyo esifushane ngakwesobunxele sikhombisa ngokusobala imiphumela yokuthela kwamanzi endaweni yensimbi.
Lokhu kulingisa umsindo wemvula nangaphandle kwenzuzo yesembozo sempahla esezingeni eliphezulu e-Silent Roof. KHUMBULA, yenza ivolumu yensiza yakho ngaphambi kokucindezela inkinobho yokudlala. Ingoma yomsindo ethakazelayo kanye nevidiyo.
Umkhakha Wezamafilimu - Vakashela i-Blog Yethu
Ngabe ubamba iqhaza kwi-The Filter Industry?
Ngabe imvula yomsindo iyinkinga kuwe? Sinesixazululo sendlela yokumisa umsindo wemvula.
I-Monster Roof '
Entwasahlobo ye-2018, sithole umbuzo obuze ukuthi: -
“Sawubona… Lokhu kungahle kube okungajwayelekile. Nginesakhiwo esikhulu sokugcina esifuna ukukhombisa ubufakazi bemvula futhi asikwazi ukufaka lutho ngaphakathi ukuze izindlela ezijwayelekile zokufaka zingasebenzi. Ngabe i-Silent Roof Material yakho ingafakwa ngaphandle ophahleni lwezindlu lwensimbi? "
Lokhu kuphenya kuthuthukiswe ekufakweni kokuqala kweSilent Roof okuhambisana nokuqoshwa komsindo ngaphakathi kwefilimu. Kwenzeka ukuthi i-AKA enkulu yokugcina impahla ” The Monster yayitholwe ukufaka isethi yokuqopha ifilimu. Lolu uchungechunge oluzokhishwa yiSky Atlantic ngokuhamba kwesikhathi ngo-2019. I-Silent Roof yethule isisombululo enkingeni yomsindo wemvula oqhamuka ezinhlakeni zophahla oluqinile. Umsindo wemvula ungathikameza imisebenzi yokuqopha yabasebenzi bokuqopha kusethi engaphansi kophahla lwendawo yokugcina impahla. Lokhu kuphumelela kwaphumelela kangangokuba eminye imibuzo yaphinde yalandelwa ehlotshaniswa neFilimu Industry. Ekuqaleni kuka-2019, ukukhiqizwa okusha kukaSam Mendes '1917' okuvela kwaStoryworks kuhlanganyele iSilent Roof Ltd ukuhlinzeka, ngeRain Noise Reduction Technology ezindaweni zokuqopha izithombe endaweni yaseSalisbury e-UK.
Uthulisiwe Othukile e-USA
IMoffett Productions ese-USA futhi sisebenzise umkhiqizo wethu esiteshini sabo sefilimu eHouston, eTexas. Sizobheka ukuthi kwenzekani ngeMoffett Productions ngenzalo.
Ingabe nawe unesimo esifanayo? Sithinte - Sinesisombululo - Akusekho ukuphazamiseka komsindo wemvula.
Ochwepheshe be-TV STUDIO GROUP Ltd ezakhiweni zesikhashana, ama-studio fit-outs, izindlela zokwelapha ezizwakala kanye nokukhiqizwa kwemicimbi Emhlabeni Wonke. I-TV neFilm Studio Group bangongoti ekufakweni okungenawo umsindo, ukwelashwa kwe-acoustic, ama-studio fit-outs, ukwakha izakhiwo ezinomphela kanye nezakhiwo zesikhashana ezifana; ama-pop-up studios, ama-workshops, amagumbi okudlela akude ngokwenhlalo nezinye izakhiwo ezisekelayo Okuhlangenwe nakho kwabo nokuzibophezela kwabo emsebenzini kwenza I-TV Studio Group ltd ukulingana okufanelekile kokufaka izinto eziThulile zoPhahla futhi basebenzise ngempumelelo i-SRM ezinqolobaneni eziningi, ezinqolobaneni, ophahleni lwesitudiyo se-TV kanye namaFilimu futhi yibona abafaka izincomo ze-SRM.
Ukufakwa kwangaphambilini kwezinto eziThulile zoPhahla kufaka phakathi imikhiqizo eminingi yamafilimu neyethelevishini; '1917' Sam Mendes Movie, The Batman at Leavesden Studios, HS2 safety videos and lots more, Chofoza lapha ukubuka eminye imininingwane ngokufakwa kophahla buthule muva nje esikhungweni sokuqeqesha i-HS2 eBrackley naseLondon Film Studios.
Uphahla Oluthulekile - Ukufakwa Kokulungiswayo
Muva nje samukele ukufakwa komakhenikha
inqubo lapho ubude bude noma ukusebenza khona ukuphakama
ukukhishwa. Isithombe kwesokudla kwakuyisembozo sesikhashana sesiphala
isetshenziselwe ukuqoshwa kwe-Sam Mendes WW1 epic '1917'.
Indaba eyingqayizivele evimbela imvula ewela imvula ngokulula ibheke phezulu, amanzi emvula abe esehamba edabula ethafeni, bese eqhubekela ophahleni lokuqala bese ehlelela ohlelweni lwamanzi emvula.
Indwangu ye-Silent Roof i-UV izinzile. Ngenxa yezakhiwo eziguquguqukayo zezinto ezisetshenziswayo zingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo okuyi-flat noma egobile. Sakhe izindlela ezahlukahlukene zokutholwa kokuqukethwe ezindaweni ezahlukahlukene.
Umsindo wemvula udluliselwa kithi ngesimo samaza omsindo. Ngesikhathi sokuwa kwemvula kukhiqizwa izindlela ezahlukahlukene ezihlobene nomthelela wamaconsi emvula ophahleni. Isakhiwo sophahla esivele sikhona sizosebenza njengezinto zokuvimbela umsindo ngandlela thile kepha mhlawumbe ukulawulwa komsindo wemvula bekungeyona into eyinhloko ebhekiwe lapho kwakhiwa uphahla okukhulunywa ngalo. Lapho ubhekene nokuzama ukuvimba uphahla ngomsindo wemvula, ukucatshangelwa kokuqala kungenzeka ukuthi kube ukufaka izinto ezizwakalayo ukulwa nobubanzi bemisindo (umsindo wemvula), ovela esakhiweni sophahla. Noma yisiphi isakhiwo sizodlidliza kuma-frequencies athile, amapaneli okufulela kungaba yinsimbi noma ahlanganisiwe aziphatha njengesikhumba sedrama futhi lapho kuthinteka kuzokhipha umsindo. Akunangqondo yini-ke ukwethula izinto zokwelashwa kwe-acoustic ezenzelwe ukubhekana ngqo nale nkinga yomsindo.
Indlela ejwayelekile kungaba ukufaka isisindo ophahleni. Sonke siyazi ngokuqonda ukuthi uphahla olujiyile noma udonga kuzovimbela ukwanda komsindo (amagagasi omsindo). Ngakho-ke yenza uphahla lube lukhulu ukuze unciphise umsindo okhiqizwa ukuna kwemvula, ingabe le akuyona impendulo esobala? Umthetho owaziwa kakhulu wokuvikela umsindo yiMisa Law. Lokhu kusho ukuthi ngokuphindaphinda isisindo somgoqo we-acoustic uzothola cishe ukuthuthuka kwe-6dB ekunciphiseni umsindo. Ngamanye amagama, uma ubuphindaphinda kabili usayizi wodonga lwezitini, ngokwesibonelo, uzothola cishe ukuthuthuka okungu-30-40% ekuvimbeleni umsindo. Ngokunjalo nophahla, kepha manje kufanele sicabangele ukulayishwa okungeziwe esizokwethula, ingabe uphahla lungakusekela lokhu kulayishwa okungeziwe futhi ngamalini futhi ngamuphi umzamo?
NOMA KUFANELE SIBHEKE LESI SIQINISEKISO KUSUKA EKUHLANGANISELWENI OKUHLE?
Ukungeza isisindo ophahleni kubhekelwa ukubhekana nenkinga yomsindo wemvula EMVA kokuba sekwenzekile. Enye ikhambi kungaba ukuvimba umsindo wemvula ngaphambi kokuba kwenzeke? I-Silent Roof Material (SRM) yenza lokho njengoba ifakiwe KUPHELA kophahla phezulu kophahla olukhona luphazamisa imvula enamandla. Ngaphezu kwalokho, i-SRM inesisindo esingu-800gms kuphela ngemitha skwele, noma yisiphi isakhiwo sophahla kufanele sikwazi ukuxhasa lokhu kuhlanganiswa okuncane. Ngakho-ke esikhundleni sokwengeza isisindo, indlela yokusebenza yeSilent Roof izosebenza kanjani?
I-Silent Roof Material (SRM) ingumkhiqizo oyingqayizivele wokuthi ngamagama alula ithule imvula igeleza phansi endaweni engaphezulu ebushelelezi ngaphandle kokudlulisa umsindo onomthelela okhiqizwe ophahleni olungaphansi. Amanzi emvula abese edabula ethafeni le-SRM bese ehlehla ethule eqonde ophahleni lwangempela bese ehlelela ohlelweni lwamanzi emvula. I-Silent Roof izomisa iningi lomsindo wemvula kunoma yisiphi isakhiwo esophahla kuya ekuhlebeni nje. Indwangu imnyama ngombala futhi i-UV izinzile. Ngenxa yezakhiwo eziguquguqukayo zezinto ezisetshenziswayo zingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo okuyi-flat noma egobile. Sakhe izindlela ezahlukahlukene zokutholwa kokuqukethwe ezindaweni ezahlukahlukene.
'Indwangu ye-Silent Roof iyinto eguquguqukayo, enobukhulu obuhlukahlukene, ekhiqizwa kusuka kumafilamitha e-polyamide ahlanganiswe lapho ewela khona ukwakha ithamu elinzima, elivulekile. Inomhlane oyisicaba ohlangothini olulodwa olukhiqizwe kusuka kumafilayidi endaweni engajwayelekile, enezici ezimbili enhlanganiswe ngokomqondo ekwakhekeni kobubanzi obuhlukahlukene.
Izakhiwo Zophahla Lephrofayela Zimbozwe ngokuphelele ngobude obungapheli bokunamathela okufushane kwe-Silent Roof, ubude obuthile buvikelekile kumakhelwane futhi bugxishwe emaphethelweni. Ngenxa yesakhiwo esivulekile sethenisi sokwenza lokhu kunikeza ukumelana komoya okuncane kakhulu ngakho-ke kungathikamezwa yizimo zezulu ezingekho lutho.
Phinda usebenzise - Indawo Ehlukile
I-Silent Roof ingafuduswa. Lokhu kusebenzisa kabusha kuyindawo eyingqayizivele ye-Silent Roof Material (SRM). Uma uthenga noma yiliphi inani le-SRM, wenza lokho wazi ukuthi lingahanjiswa esakhiweni sophahla esihlukile njengoba futhi ufuna. Lokhu akwenzeki cishe kuzo zonke ezinye izindlela zokwelapha ezisetshenziselwa ukuthola umphumela womsindo wemvula ezindongeni zophahla.
Indlela ejwayelekile ukuzama ukwehlisa izinga lokungcoliswa komsindo EMVA kokuba kwenzeke ngokungeza isendlalelo (s) sokususa umsindo (i-acoustic) sokunciphisa umsindo (s) ngokwesibonelo esingaphansi kwesakhiwo sophahla.
Indwangu yophahla ethule isetshenziswa engaphandle kwesakhiwo sophahla, imisa amaconsi emvula anethonya ophahleni lwophahla ngendlela yokuthi anciphise kakhulu umsindo wemvula ngaphambi kokuthi kwenzeke.
Ngemuva kwalokho unenketho yokuqalisa i-SRM, uyihambise kwenye indawo futhi uyisebenzise futhi imvula iphinda inciphise umsindo futhi, futhi, futhi futhi… Ukuthenga okukodwa, izicelo eziningi.
Yimuphi omunye umkhiqizo onale ndawo yokusetshenziswa kabusha maqondana nokungcola komsindo wemvula? Ngokwazi kwethu, AKEKHO.
Isithombe esingakwesokudla kulapho i-Silent Roof Material yaphinde yatholakala khona e-Monster Roof e-Southall futhi yafakwa kabusha e-Ignition Building endala e-Wembley, isithombe esingakwesokudla ngesangaphambi nangemuva kweSilent Roof Material ifakwe esakhiweni esidala se-Ignition.
Konke lokhu kwenziwa ngezinsuku ze-6 kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Sizinze ogwini oluseningizimu yeNgilandi, kepha ungahle ube neprojekthi engqondweni kwenye indawo engaphandle kwe-UK. Uma unesimo lapho umsindo wemvula ovela esakhiweni sophahla uthinta indawo yomsebenzi noma indawo yokuhlala engezansi, Singahlela ukuthekelisa impahla yethu ethule yophahla iye endaweni yakho nomaphi lapho ingahle ibe khona emhlabeni jikelele.
Ukufakwa kwe-Silent Roof impahla kungobulula uqobo futhi uzoqondiswa ngazo zonke izinyathelo zendlela nge-on-line noma ukwesekwa ngocingo uma futhi kudingeka.
I-Silent Roof Material (i-SRM) ihlinzekwa ngamabhali imitha eli-1 ububanzi futhi ifike kumamitha angama-60 ubude. Imitha eyisikwele ye-SRM ingu-800g futhi ingu-17mm ubukhulu. Amabhali angalethwa kusikwe kusengaphambili kunoma ibuphi ubude obudingayo kuphrojekthi yakho kungaba yindawo yophahla oluyisicaba, olugxotshiwe.
Xhumana nathi manje ngolwazi lwamanani nentengo yokulethwa.
Ifoni: 01803 203445
Imbalwa izinkampani ezimbalwa esinazo noma esisebenza nazo njengamanje
Yini isisindo sempahla ye-SR
Yini isisindo sokufakwa kweSilent Roof? Isisindo sempahla eseSilent Roof ingama-800g kuphela ngemitha skwere. Ayisixwayi ngakho-ke ngeke iwagcine amanzi emvula ukuze angeze kulayishwe esakhiweni esinikeziwe sophahla.
Ayini amanani we-'U 'no'R'
Mayelana ne-Silent Roof Material yethu, amanani we-'U 'no-'R' awanalutho lapho kucatshangelwa ukusetshenziswa okuthile okuwukunciphisa kakhulu umsindo owenziwe imvula onomthelela ophahleni lwophahla. Indwangu ye-Silent Roof ayenzelwe ukuba ibe umkhiqizo wokufakelwa okushisayo.
I-U-factor ne-U-value amagama angashintshiswa abhekisa kwisilinganiso esithile sokuthola ukushisa noma ukulahleka kokusebenzisa okuthile ngenxa yomehluko phakathi kokushisa komoya kwangaphakathi nangaphandle kwento okukhulunywa ngayo. I-U-factor noma i-U-value nayo ibizwa nge-coefflements ephelele yokudluliswa kokushisa. Inani eliphansi le-U libonisa izakhiwo ezifaka insulini kangcono. Amayunithi yiBtu / (hr) (ft2) (° F). Okokusebenza kwe-Silent Roof kwakudalelwanga ukuthi kube yisisulu ngakho-ke inani le-'U 'lezinto ezibonakalayo alikabalwa.
Imininingwane Yomkhiqizo / Ishidi Lemininingwane
Chofoza lapha ukuthola ikhophi le-pdf
Kuthatha isikhathi esingakanani ukufaka
Kuthatha isikhathi esingakanani ukufaka i-Silent Roof. Lapho ifakwa kuzakhiwo zeProfile Metal Roofing (PMR) nokunye okunjalo, i-Silent Roof Material (SRM) imane ikhishwe phezu kophahla kusuka e-eave kuya phezulu nangaphezulu kokhalo lwophahla. 'Umugqa' ngamunye uzoba ububanzi obuyi-1m. Umucu olandelayo ubekwe ubheke phansi emgqeni wokuqala bese 'uthungwa' ndawonye kusetshenziswa othayi bekhebula le-PVC. Lo mdwebo bese uphenywa ukuze ulale eduze komakhelwane futhi inqubo iphindaphindwe. Kusetshenziswa le ndlela indawo enkulu yophahla ingambozwa nge-SRM esikhathini esifushane uma kuqhathaniswa nemitha engamamitha-skwele angama-60 ngehora nethimba lama-fitters amabili kuyinto ejwayelekile.
Isikhathi Sokulethwa Sokulethwa Kwendawo
Isikhathi sokulethwa seSilont Silent kusuka esakhiweni sokukhiqizelwa kuye kwisisekelo sethu sase-UK sizothatha phakathi kwamaviki we-3 nama-6 ngemuva kokuthola i-oda lakho eliqinisekisiwe ngokuya ngomthwalo womsebenzi wamanje
Isikhathi sokuphila esilindelekile sePhahla Elithulayo
Sinezinto ezifakiwe manje ezineminyaka eyishumi futhi azikhombisi zimpawu zokucekelwa phansi. Ukusiza ukuhlanza isikhathi eside kunconywa ukususa imfucumfucu ephuma matrix.
Ungakwazi ukulayisha umbiko we-Silent Roof Acoustic lapha
(c) Wonke Amalungelo Agodliwe 2007 - 2020 Silent Roof Ltd.
Inikezwe amandla yi I-EMF Ifomu le-inthanethi
Siyabonga ngokubhalisela. Yabelana ngesixhumanisi sakho esiyingqayizivele sokuthola amaphuzu ukuze uthole imiklomelo ..